Ghọta ihe kachasị mma nke blackberry - Blackberry Ruben - 2019
Ihe dị iche iche na-arụ blackberry
Taa, ndị na-elekọta gardeners na-achọsi ike na blackberry remontant iche na mmasị. Ugwu ndị a adịghị atụ egwu mmiri oyi na mmiri mmiri n'oge opupu ihe ubi, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe ha maka oyi na ime ụlọ. N'oge oyi, a na-ebipụ akụkụ niile dị n'elu ala, na-ahapụ naanị usoro mgbọrọgwụ. Nke a na-enye anyị ohere ka anyị ghara ichegbu onwe anyị banyere òké ma ghara iji kemịkal na-emeso osisi ahụ, nke nwere mmetụta dị mma n'àgwà ebe obibi nke tomato.
Ime Anwansi Anwansi
Prime Arch 45 (Igbe Mbụ 45)
Ịgba akara nke blackberry
Prime ụgbọ Freedom (Prime ụgbọ Freedom)
Ngwunye dị iche iche nke blackberry
Onye na-arụ Blackberry nwere ọtụtụ ụdị: enwere ụdị ogwu, n'enweghị ogwu. Ogwu ogwu nke blackberry adịghị elu, owuwe ihe ubi ahụ buru ibu.
Ntị! N'okpuru ibu nke tomato, alaka nke ohia na-ehulata ala ma nwee ike imebi na ibu nke ha, ya mere a na akwado ha ka ha tinye ihe nkwado ma o bu ihe di iche iche, dika raspberries.
Maka owuwe ihe ubi buru ibu na nnukwu ihe ubi, a naghi ekwe ka ohia di ocha, na-eme ka ndi ozo di iche. N'otu oge ahụ hapụ alaka anọ ma ọ bụ ise kachasị ike. Ndi oru ugbo ndi ozo, choro ka ha gbasaa osisi, na-acha akwukwo ndu na greenhouses.
Blackberry cultivar "Ruben" bụ nke mbụ nke ụdị ndị ọzọ na-amị mkpụrụ na Ome nke afọ dị ugbu a. Uzo a di iche iche bu ihe ndi otu nkuzi nke Mahadum Arkanza bu ndi ndi okachamara si akwukwo ulo akwukwo Bekee nke Hargreaves. Na Europe, "Ruben" pụtara na 2011. Nke a bụ kọmpat ohia nke nwere alaka siri ike na-etowanye elu. Ihe dịgasị iche iche dị oké ọnụ ahịa na ọ na-egbochi ụkọ mmiri ozuzo, na-etolite na ala ọbụla ma na-achọ naanị ebe anwụ na-acha mgbe a kụrụ ya, na-emepe nke ọma na ndochi anya.
Ogo nke oji blackberry "Ruben" - 1.75 mita. Enweghị ogwu n'osisi ndị na-amị mkpụrụ, nke na-eme ka owuwe ihe ubi dị mfe. Ohia blooms mara mma na nnukwu ọcha buds. N'afọ mbụ nke ịkụ ihe, mkpụrụ nke ihe ubi ahụ bụ ntakịrị ngwụrọ, ma kwa afọ, ọnụ ọgụgụ na ọtụtụ obi ụtọ na-atọwanye ụtọ. Enwere ike ichoputa mkpuru osisi ruo n'oge oyi mmiri, n'ihi na ọtụtụ dị iche iche na-eguzogide oyi.
Okwu nke ripening tomato "Ruben" - site na August ruo October gụnyere. Achịkọta buru ibu - ihe dị ka centimeters n'ogologo, mgbe ụfọdụ ọ na-eru ogo 14, 5 grams. A na-ebipụ iche iche maka oyi ma ghara ekpuchi ya, usoro mgbọrọgwụ nke osisi ahụ anaghị efeto.
Mmasị Na akụkọ ifo Gris n'oge ochie kọwara agha nke iri nke chi dị iche iche na ihe ọkụkụ. Agha ahụ biri na mmeri nke Crohn na ndị Titans na-akwado ya. Egburu ndị Olympia ndị a meriri ma tụba ha na Tartar, nakwa n'ebe a na-awụfu ọbara nke titans, mkpụrụ osisi blackberries toro.
Blackberry "anwansi anwansi" na-amị mkpụrụ na Ome nke afọ dị ugbu a. Ejiri ogwu mechie alaka ndi ozo, ma o nweghi ogwu n'osisi ebe osisi toro. Alaka na-eto eto ma na-eru mita abụọ n'ịdị elu. Mgbe ị na-eto eto dị iche iche, lekọta nkwado maka alaka. Ụdị dịgasị iche iche na-eguzogide ntu oyi na ọrịa, ma ọ bụrụ na ị bepụghị Ome, ma kpuchie ha, mgbe ahụ na June ị nwere ike iwe ihe ubi. A na-awụ mkpụrụ osisi na ihe ọṅụṅụ ma dị mma maka ojiji site n'afọ iri abụọ nke August, alaka nke afọ nke abụọ amị mkpụrụ na July. Mkpụrụ osisi blakberị "anwansi ojii" dị ịtụnanya - kilogram isii site na ohia. Na tomato bụ nnukwu, inky-acha odo odo, arọ nke tomato - 11 grams. Ụdị blackberry dị iche iche nwere ngosipụta zuru oke nke ovary ahụ, ọbụna n'oge okpomọkụ n'oge okpomọkụ. Osisi dị iche iche na-eme njem.
A gbanwere ụdị dịgasị iche iche na Arkansas na afọ 2009 ma nwee ihe ịga nke ọma ịgafe ule. Osisi na-etolite na mbara igwe, na-eguzogide ọrịa, ụkọ mmiri na ntu oyi. Blackberry tomato chara n'onwe ke mbubreyo August - mmalite September. Mkpụrụ osisi dị oke ma na-egbuke egbuke, nke a na-ebugharị, dị ụtọ ma na-esi ísì ụtọ. Mkpụrụ tomato - ihe karịrị itoolu grams. Osisi dị iche iche "osisi arc 45" dị iche iche na-acha ọkụ. O nwere nnukwu okooko osisi na-acha ụfụfụ, alaka ya jupụtara na epupụta, ogwu bụ naanị na mkpuru osisi.
Ọ dị mkpa! Maka oyi, ọ bụ ihe amamihe dị na ndo a ohia si ntu oyi: nke a dịgasị iche iche abụghị karịsịa ntu oyi na-eguzogide ọgwụ.
A na-ewere ụdị a dịka otu n'ime ụdị blackberry. Mkpụrụ olulu Prime Ya, na echiche nke ọtụtụ ndị na-ahụ ụdị a dị iche iche, nwere nkwupụta akwụkwọ na apụl. Osisi nke ọkara dị mkpa karịa ịkwụ ụgwọ uto. Nke a dịgasị iche iche na-amalite na mbubreyo August - mmalite September. Osisi siri ike na-etolite elu ruo mita abụọ elu. Nkwado dị ha mkpa ka ha wee ghara imebi n'oge oge mkpụrụ osisi ahụ. Ụdị dịgasị iche iche nwere oke eguzogide ntu oyi ma na-eto ebe ụdị blackberry anaghị adị ndụ.
A ka na-anwale ụdị ígwè ọrụ blackberry nke kachasị ọhụrụ "Prime Jim", ma a maara ụdị ụfọdụ nke ụdị dị iche iche. Osisi ndị dị n'ọhịa, na ogologo osisi ndị kacha mma maka oyi. Na tomato a dịgasị iche iche bụ elongated, ụtọ-utoojoo na nwere mulberry aftertaste.
Inye ụdị blackberry dị iche iche na-adịghị eguzogide ọgwụ, kama ọ bụ ezigbo mkpụrụ. E nwere ụdị dị iche iche nwere ike ịmị mkpụrụ ruo mgbe mbụ ntu oyi, mgbe toro na greenhouses, tomato nwere ike iwepụta n'oge oyi.
Ị ma? Ndị ọkachamara si Mahadum Pittsburgh School nke Medicine mgbe ha nyochaworo ogologo oge kwubiri na blackberry nwere ike iji dịka ihe ọkụkụ maka ọgwụ na ụdị ọrịa leukemia na lyphoma. Ihe dị na beri nwere ike ibibi mkpụrụ ndụ kansa kansa n'enweghị nsogbu ọbara ndụ.
E nyere akwụkwọ ikike ahụ maka ọkwa mbụ nke blackberry repairman na-enweghị ogwu na 2013. Na-amụba na nke a dịgasị iche iche n'oge. Owuwe ihe ubi na-amalite na July - August. Osisi siri ike, site na itoolu ruo iri na ise grams n'ịdị arọ, ogologo mkpụrụ ahụ dị anọ na ọkara sentimita. Osisi ndị dị arọ ma dị mma, njem ahụ na-atọ ụtọ. Osisi ahụ na-etolite etolite. Nke a dịgasị iche iche na-eguzogide ọrịa, ma ọ nwere ike ịnweta anthracnose ma ọ bụrụ na ọ na-eleghara anya. Na Arkansas na California, a na-eto ụdị dịgasị iche iche na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọ naghị esiri ike ilekọta ụdị nke blackberry, ọ dị ha mkpa mgbe nile ịgbara mmiri, ọ bụ ezie na ọtụtụ dị iche iche na-anabata oge akọrọ na-enweghị nsogbu. Nke a blackberry na-adị mfe gbasaa site na mgbọrọgwụ nwa osisi, layering, ị nwere ike nweta blackberry seedlings na usoro nke grafting. Osisi nke remontant iche oge ntoju mara mma na icho mma ubi, na tomato dị ụtọ na ahụ ike.
Ịzụ oke oke bekee n'ụlọ, otu esi egwu ya
Popular na gardeners ufọt ufọt oge na-egbuke egbuke dịgasị iche iche nke tomato - "Apple Spas"
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ihe dị iche iche na-arụ blackberry